Finesse: Ku rakib, Ku dar Alaab, Samee Lacag. | Martech Zone
Khamiis, Juun 2, 2015 Arbaco, Juun 1, 2015 Douglas Karr
Dhammaanteen waxaan u isticmaalnay qaabeynta qaab-dhismeedka ecommerce ee ku daraya bogagga wax soo saarka leh dusha alaabta iyo bogagga wax soo saarka caadiga ah ee sawirada, sharaxaada iyo dib u eegista. Khibradahaas dukaamaysiga ee qadiimiga ah waxaa lagu beddelay khibrado wax iibsi oo qurux badan kuwaas oo isku daraya dhammaan astaamaha nidaamka nuxurka quruxda badan lehna awoodaha nidaamka e-commerce.
The Mawduuca Finesse waayo, WooCommerce waa tusaalaha ugu fiican ee jiilkan cusub ee waaya-aragnimadan wax iibsashada ah.
Finesse waa a WooCommerce dulucda loo sameeyay in la iibiyo. Waxaa laga soo diyaariyey sagxadda ilaa kor si ay u noqoto mid qurux badan, dabacsan oo weyn u leh beddelaadyada. Haddii aad had iyo jeer rabto inaad awood u yeelato inaad ku iibiso alaabadaada habkaaga, Finesse waa mawduuca adiga!
Astaamaha muhiimka ah ee mawduuca Finesse ee Naqshadeynta Dukaanka
Qalab fudud - Soo rar Finesse, ku dar astaantaada oo bilow inaad ku darto waxyaabahaaga.
Xayiraadaha Mawduuca - Kudar baloogyo leh asal firfircoon oo lagu dulqorey nuqulkaaga suuq geynta si aad ugu soo jiitaan macaamiishaada. Xiriir la samee iyaga adoo adeegsanaya fiidiyow.
Aaladda Wareegsan - Gali badeecadaha meesha aad rabto, ama ka tag qaybaha aadan u baahnayn. Kuma xadidna naqshadeynta hore.
Bogagga Soo Degida Aan Xaddidnayn - Abuur bogag badan oo degitaan sida aad jeceshahay inaad yeelato. U samee bog si gaar ah mid kasta oo ka mid ah ereyadaada raadinta muhiimka ah. Dariiqaas booqdayaasha ka socda Google waxay ugu hagaagi doonaan waxyaabaha ay raadinayaan.
mobile - Loogu talagalay dhulka hoostiisa si uu ugu fiicnaado cabirka shaashadda yar iyo weyn. Waa mawduuc dhif ah oo labadaba si fiican u shaqeeya.
Beddelashada Lafilayo - ka saar marinka iyo wijetiyada meelaha laga baxo si aad u hubiso in isticmaaleyaashu aysan wax gujin kahor intaadan dhameystirin iibsigooda
Fast - oo loogu talagalay waqtiyada bogga xawaareynta si loo hagaajiyo labadaba raadinta iyo beddelaadda.
Sida aad hoos ka arki karto, waa mawduuc aan caadi ahayn:
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Naqshadaynta Dukaanka.
Tags: ganaaxnaqshadaha dukaankawoocommercemawduucyada woocommerce